सुन्दर गिली टापु | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | पर्यटन गन्तव्यहरू, टापुहरू
El दक्षिण पूर्व एशियाई प्याराडाइजका लायक परिदृश्य छ र ती मध्ये केही द्वारा प्रदान गरिएको छ गिलि टापु, लोम्बोकको नजिक, इन्डोनेसियामा। लोम्बोक एक टापु पनि हो, यो लेजर टापुहरूको अंश हो, बालीबाट स्ट्रेटद्वारा विभाजित गरिएको छ, त्यसैले तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ कस्तो प्रकारको परिदृश्य छन्।
गिलि टापु लोम्बोकको चरम दक्षिण-पश्चिममा अवस्थित टापुहरूको सानो समूह हो र केही समयका लागि तिनीहरू ठूलो हुन्छन्। ब्याकप्याकिंग गन्तव्य र व्यक्ति जो पानीमुनि सुन्दरताको आनन्द लिन्छन्।
1 गिलि टापु
2 गिलि टापुमा पर्यटन
यी टापुहरू tourism० र 80 ० को दशक बीचको विश्व पर्यटनको आँखामा देखा पर्‍यो र त्यसबेलादेखि तिनीहरू कुनै नक्सा बिना नक्शाको क्रममा देखा पर्छन्। केरा प्यानकेक ट्रेल, विदेशी पर्यटकहरूको लागि गन्तव्यहरूको मार्ग, अधिकतर ब्याकपैकरहरू, जुन दक्षिणपूर्व एशियाको भागहरूमा बग्दछ, जसले उनीहरूलाई प्रेममा पार्दछ। यति धेरै कि उनीहरूमा धेरै बारहरू, होस्टलहरू वा समुद्र तटमा समुद्री किनार बारहरूमा स्थायी रूपमा समाप्त हुन्छन्।
आज टापुहरूमा त्यहाँ पहिले भन्दा बढी सेवाहरू छन् त्यसैले त्यहाँ रेष्टुरेन्टहरू, क्याफेहरू र बारहरू छन् र सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि धेरै आराम वातावरण धन्यवाद कुनै मोटरसाइकल वा कार छैन त्यो प्रकृतिको आवाज संग भाँच्नुहोस्। ध्यान समुद्र र समुद्र किनारमा छ त्यसैले मानिसहरू आराम गर्न, रमाइलो गर्न र डुबुल्की पाउन सक्छन्।
गिलि लोम्बोक भन्दा चर्को र सुक्खा छ तर दिउँसो वा रातमा यो शान्त हुन सक्छ। तपाईं जान चाहनुहुन्न नोभेम्बर र अप्रिल बीचमा किनभने यो वर्षा .तु हो यद्यपि यो जान्न लायकको छ, यो बाली भन्दा धेरै कम वर्षा हुन्छ जुन एकदमै कष्टकर छ। The उच्च पर्यटन मौसम? ठीक छ, गर्मी, जुलाई र अगस्त, र डिसेम्बर र जनवरी.
गिलि टापुहरू मूल रूपमा तीन साना टापुहरू हुन्: गिली एयर, गिली मेनो र गिली ट्रावाw्गन। पछिल्लो सब भन्दा ठूलो हो त्यसैले यो अधिक भ्रमण गरिएको छ र अधिक "पार्टीि" "गरिएको छ। ला गिलि मेनू अरुको बीचमा छ र धेरै आराम गरीरहेको छ, अधिक आत्मीयताको खोजीमा रहेका जोडीहरुको लागि आदर्श; अन्तमा, गिलि एयर लोम्बकको समूहको सब भन्दा नजीक हो, जुन सबैभन्दा विकसित छ र सबैभन्दा धेरै ब्याक प्याकरहरूलाई आकर्षित गर्दछ।
जनसंख्या मुस्लिम छ र ती हाम्रो पश्चिमी परम्पराको लागि प्रयोग भए पनि, यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईंले सँधै बिर्सनु हुँदैन। Nudism वा topless लाई अनुमति छैन र समुद्री किनार बाहिर नुहाउने सूटमा हिड्दै छैन। भाग्यले रमादामको समयमा तपाईले ठूला परिवर्तनहरू देख्नुहुने छैन किनकि यो सबै पछि पर्यटन गन्तव्य हो।
तपाईं कसरी गिलि टापुहरूमा पुग्नुहुन्छ? गिलीमा कुनै एयरपोर्टहरू छैनन् त्यसैले तपाईं लोम्बोक वा बालीमा जानु पर्छ र त्यहाँबाट डु take्गा लिनु पर्छ। गरुड, अन्य एयरलाइन्स बीच यो मार्ग बनाउँछ। को बालीबाट फेरीहरू तिनीहरू पनि एक विकल्प हो। त्यहाँ एक छ जुन पदांग बाईबाट लोम्बोक सम्म प्रत्येक घण्टामा जान्छ, यो चार देखि छ घण्टा लाग्छ र धेरै सस्तो छ। त्यहाँबाट दुई घण्टा गिलि बंगलको बन्दरगाहबाट छुट्नेहरूको स्थानीय डु boat्गामा।
यद्यपि लोम्बोक नजिक छ बलि सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो किनभने सेवाहरू छिटो छन् र त्यहाँ धेरै प्रत्यक्ष छन्। तिनीहरू बेनोवा वा सेरंगनको बन्दरगाहबाट बालीको पर्यटक भागबाट आधा घण्टा सम्म प्रस्थान गर्छन्। केही कम्पनीहरूसँग टिकट बुक गर्न वेबसाइटहरू पनि हुन्छन्।
टापु वरपर कसरी पुग्ने हो? त्यहाँ कुनै कार वा मोटरसाइकल छैनन् त्यसैले मात्र छ घोडा-कोरिएको कार्ट वा साइकल। जनावरहरू धेरै राम्रो स्थितिमा छैनन् त्यसैले बाइक भाँडा लिन सल्लाह दिइन्छ किनकि टापुहरू वास्तवमै सानो छ। टापुहरू बीच जानका लागि डु boats्गाहरू छन्, कोपेरासी: तिनीहरू बिहान :8::30० र १० बिहान र दिउँसो to देखि :10::3० सम्म काम गर्छन्।
गिलि टापुमा पर्यटन
यो मुख्यतया घाम बाल्ने र डाइभि .को बारेमा हो। त्यहाँ धेरै गोता केन्द्रहरू छन् र शुरुआतीहरूको लागि स्कूलहरू। यी टापुहरूमा विभिन्न प्रकारका प्रजातिहरूका कछुए, तोता माछा, चट्टान शार्क सहित समुद्री जीवनहरू छन्।
गिलीमा प्रायः डाइभि and र स्नोर्कलिंग केन्द्रहरू कोरल चट्टानको रक्षा गर्ने विचारको साथ २००० देखि सम्बन्धित छ। त्यहाँ छन् १dडाइभि sp स्पटहरू चट्टानहरू, पानीमुनि भित्ताहरू, स्पंजहरू, शार्कहरू वा स्टिंग्रेहरू हेर्न।
तपाईको भ्रमण पनि गर्न सक्नुहुन्छ डु ride्गा सवारी तीनवटा टापुहरू वा लोम्बक वरिपरि, तर धेरैका लागि यो उत्तम हो केहि गर्न नपरोस। एयर र मेलो यसको लागि उत्तम हो, केवल समुद्रमा अ a्कित बंगला भाँडामा लिनुहोस्। तपाईं हिड्न जान सक्नुहुन्छ, तपाईं टापुहरू यात्रा गर्नुहुन्छ केवल minutes ० मिनेटमा तट पछि। Y यदि तपाईं थोरै पार्टी चाहानुहुन्छ भने, गन्तव्य Gili Trawangan हो यो अधिक रातको जीवन छ। मेरो मतलब लाइभ संगीत र डीजेको साथ बारहरू, उदाहरणका लागि।
केही स्थानहरूमा तपाई क्रेडिट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ तर त्यसले तपाईलाई ब्याज लिनेछ र जहाँ अधिक एटीएम छन् त्यहाँ स्पष्ट रूपमा ट्र्रावाan्गनमा छ। मेरो सल्लाह भनेको तपाईं नगद लिएर जानुहुन्छ। अर्कोतर्फ, आवास प्रस्ताव पनि असंख्य छ, विशेष गरी ब्याकप्याकरहरूको लागि। गिलि ट्रावाan्गन पनि यहीँ हो जहाँ तपाई बस्नको उत्तम गुण पाउनुहुन्छ, लक्जरी, आकर्षक र निजी घरहरूको साथ।
पर्यटकहरू जसले भारी पिउँछन् विशेष गरी स्थानीय रूपमा उत्पादित पेय पदार्थहरूको लागि सावधान हुन चेतावनी दिइन्छ, उदाहरणका लागि अरक। यस्तो देखिन्छ कि तिनीहरूले यसमा केही विषाक्त पदार्थ हालेका थिए र यसले पर्यटक र स्थानीयहरूको माझमा गम्भीर समस्या खडा गरेको छ। यदि तपाईं महिला हुनुहुन्छ भने, विशेष गरी तपाईंको पेय एक्लो नराख्नुहोस् वा स्थानीय पुरुषलाई राम्रो नबनाउनुहोस्। त्यहाँ उल्ल .्घन वा स्थितिहरू छन् जब थकित हुन्छ जब हाम्रो no यो त्यस्तो बुझिएन।
स्पष्ट रूपमा त्यहाँ पदार्थ, मतिभ्रमको मशरूम र विशेष गरी मारिजुआनाको संचलन छ, तर यो नबिर्सनुहोस् कि यो मुस्लिम क्षेत्र हो र यो लागूपदार्थ लिने वा लागूपदार्थ बोक्ने अपराध हो, त्यसैले तपाईं विदेशीहरूद्वारा घेरिएको ठाउँमा पनि छुट्टीमा हुनुहुन्छ भने पनि, तिमी घरमा छैनौ। र तपाइँ जेल जान वा संसारको यस भाग मा पुलिस संग समस्या मा हुन मन पराउनुहुन्न। के तपाईंले श्रृंखला देख्नुभयो? कैदी विदेशमा?
अन्तमा, केहि स्वास्थ्य समस्याहरू: त्यहाँ लामखुट्टेहरू छन् तर टापुहरू औलो मुक्त छन्। जे भए पनि, विकर्षक मात्र लिनुहोस् किनभने डेंगूको केहि केस रेकर्ड गरिएको छ। तपाईंले बोतलको पानी पिउनुपर्दछ किनकि यहाँ चलिरहेको पानी एकदम नुन छ र विद्युतीय प्रवाहको सन्दर्भमा यो जेनरेटरले उत्पन्न गरेको छ, रिडन्डन्सीको लायक छ, त्यसैले त्यहाँ कटौती हुन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » पर्यटन गन्तव्यहरू » सुन्दर गिली टापु